Monday January 28, 2019 - 11:09:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulayaasha Nidaamka Aala Sacuud ayaa xabsiga kasii daayay mid kamida maalqabeenada ugu waaweyn dhulka Xarameynka ahna ninka ugu hantida badan wadanka Itoobiya.
Wararka ka imaanaya Sacuudiga ayaa sheegaya in xuriyaddiisa uu dib u helay ganacsade Max'med Xuseen Alcamuudi oo in kabadan Sanad xirnaa wuxuuna xarigiisu qeyb ka ahaa Ololihii uu Max'med Bin Salmaan ugu magac daray "ladagaallanka Musuq Maasuqa".
Ololahaas oo lagu beegsaday siyaasiyiin iyo maalqabeennada ugu caansan wadanka Sacuudiga oo uu kamid ahaa Waliid Bin Dalaal, Ninkan lasii daayay ee lagu magacaabo Al Camuudi ayaa heysta dhalashada wadanka Itoobiya oo uu ku dhashay waxaana sii daysmadiisa loo aaneynayaa cadaadiska dhanka siyaadda ee maamulka Aala Sacuud uu kala kulmay dilkii wariye Jamaal Khaashuqji.
Max'med Xuseen Al Camuudi waa maalgeliyaha ugu weyn ee dowladda Xabashida Itoobiya isagoo tobanaan shirkadood oo dhaqaale xooggan soo saara ku leh gudaha wadanka Itoobiya waxaana la sheegayaa in uu yahay ninka ugu lacagta badan Itoobiya iyo Ninka 2aad ee ugu hantida badan dalka Sacuudiga.
Telefeshinka Rasmiga ah ee ku hadla Afka dowladda Xabashida Itoobiya ayaa xaqiijiyay sii daysmada Alcamuudi isagoo soo xiganaya Afhayeen u hadlay xafiiska Ninkan maalqabeenka ah oo ku sugan magaalada badda cas ku teedsan ee Jiddah.
Dhinaca kale Abiy Axmed oo ah R/wasaaraha Xabashida Itoobiya ayaa dhankiisa xaqiijiyay sii daysmada Al Camuudi kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka.
R/wasaaraha Itoobiya ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay sii deysmada ganacsadahan dabadhilifka ah oo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha wadanka Itoobiya wuxuuna sheegay in dhaxal sugaha Sacuudiga Max'med Bin Salmaan uu dhowr mar kala kala hadlay sii daysmadiisa.